Ama-Ultrasonic Homogenizer - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-homogenizer e-Ultrasonic angamathuluzi anamandla okuxuba nokufaka i-homogenize okuqinile-okuwuketshezi nokumiswa okungamanzi. I-homogenization ye-Ultrasonic kuyinqubo yokwenza ukuthi inciphise izinhlayiya ku-ketshezi ukuze ibe mincane ngokulinganayo futhi isatshalaliswe ngokulinganayo. I-Hielscher inikeza ama-homogenizer anamandla we-ultrasonication isicelo kulebhu nokukhiqiza esikalini.
Umphumela we-Ultrasonic Homogenizer
Lapho ama-homogeizer e-ultrasonic asetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ezinjengokuxuba, ukusabalalisa nokufaka i-emulsifying, inhloso ukunciphisa izinhlayiya ezincane noma amaconsi ku-ketshezi noma ukusitshekela ukuthuthukisa ukufana kanye nokuqina kwengxube. Lezi zinhlayiya (isigaba sokuhlakazeka) singaba ama-solids noma uketshezi. Ukwehliswa kububanzi bezinhlayiya kusho inani lezinhlayiya ngazinye. Lokhu kuholela ekwehlisweni kwebanga elijwayelekile lezinhlayiyana futhi kwandisa indawo yangaphezulu kwezinhlayiya. Umdwebo (chofoza ukuze ubone ukubuka okukhulu) kubonisa ukuhlanganiswa phakathi kwamanye ama-particle ububanzi nobubanzi bomhlaba. Indawo engaphakathi kanye nesilinganiso sezinhlayiyana eziphakathi kwamandla angathinta ukuhamba kwemvelo.
Uma kukhona umehluko emvuthweni othile phakathi kwezinhlayiya kanye ne-liquid, i-homogeneity yenhlanganisela ingathonya ukuzinza kokusabalalisa. Uma ubukhulu bezinhlayiyana bufana nobuningi bezinhlayiyana, ukuthambekela kokuhlanganiswa ngesikhathi sokuxazulula noma ukukhuphuka kwehla, ngoba izinhlayiya ezifanayo zinesisindo esifanayo sokukhuphuka noma ukulungisa.
Izingcindezi Eziphezulu Zokucindezela
Indlela evame kakhulu ye-homogenization ukucindezela okukhulu kwe-homogenization. Lapho, uketshezi ucindezelwa ingcindezi ephezulu (cishe. 2000 barg) nge-homogenizing valve. Lapho kudlula i-valve, uketshezi lubhekana nomjikelezo omfushane (ngu-50 microsec.).
Nakuba le ndlela isebenza kahle ezincane, izinhlayiya ezithambile, ezifana nama-globules amafutha ebisi, inezilinganiso zayo lapho zisetshenziselwa ukuhlakazeka kwezinsimbi ezikhuni nezimbiza, njengama-pigment, imidiya yokuphosa noma i-oxides yensimbi, noma izinto ezinamathebhu nezintambo, ezifana izithelo ezihlanzekile, i-algae noma i-sludge. Lokhu kubangelwa ukuvinjelwa kwamanzi okuphakeme (kufika ku-120mtr / sec) futhi ngenxa yamapayipi amancane ama-valve asetshenzisiwe. Njengoba impahla ehamba phambili idlula amaphampu kanye ne-orifice ye-valve, ibangela ukugqoka. Lokhu kunciphisa ukusebenza kahle kanye nesikhathi sokuphila kwepompo ne-valve.
Ama-7 ama-homogenizer angama-7 I-UIP1000hdT (Amandla we-7x 1kW e-ultrasonic) afakwe njengeqoqo
Izinzuzo ze-Ultrasonic Homogenizer
Uma kuqhathaniswa nezindlela ezijwayelekile ze-homogenization, ama-homogenizer e-ultrasonic enza kahle ngalezi zimfanelo ezilandelayo:
Ama-homogenizer e-Ultrasonic akhiqiza izinhlayiya ezincane / amaconsi kanye ijika lokuhambisa elincane.
Ama-homogenizer we-Ultrasonic angaphatha ukugxila okuqinile.
Ama-homogenizer we-Ultrasonic ayalungiselela uzinzile ukumiswa, ukusatshalaliswa kanye ne-emulsions.
Ama-homogenizer e-Ultrasonic Ukulawula kahle njengoba izinqubo ezibalulekile zenqubo (isib. amplitude, amandla, isikhathi, izinga lokushisa nengcindezi) zingathonywa futhi zilungiswe.
Ama-homogenizer e-Ultrasonic iyasebenza kakhulu, isebenza kahle, iyasebenziseka futhi ephephile ukusebenza.
Ama-homogenizer e-Ultrasonic asebenza kahle kakhulu ekunciphiseni kwezinhlayiya ezithambile nezilukhuni. I-homogenization isuselwa ku-cavitation. Lapho uketshezi luvezwa ku-ultrasonication enkulu, amaza omsindo asakazeka ngokusebenzisa uketshezi obangela imijikelezo yomfutho ophakeme nomfutho ophansi (cishe. Imijikelezo engama-20000 / sec.). Ngesikhathi sokujikeleza kwengcindezi ephansi, amabhubu amancane aphezulu we-vacuum ayakhiwa kulolo ketshezi, njengoba kufinyelelwa ingcindezi ye-vapor ye-liquid.
Lapho ama-bubbles afinyelela usayizi othize, awela phansi ngesihluku phakathi nomjikelezo ophezulu wokucindezela. Phakathi nalezi zimbangela zokucindezela okukhulu kakhulu futhi ijubane eliphakeme liketshezi zamanzi zikhiqizwa endaweni yangakini. Izimpondo nezifo ze-turbulence eziphazamisayo ziphazamisa izidakamizwa futhi ziholele ekuqhudaneni okubudlova phakathi kwezinhlayiya zomuntu ngamunye.
Inzuzo enkulu enkulu ye-homogenizers ye-ultrasonic yinombolo ephansi yezingxenye ezimanzi nezihambayo. Lokhu kunciphisa ukugqoka kokukhathala nokuchitha isikhathi. Kukhona izingxenye ezimbili kuphela ezimanzi: i-sonotrode kanye neselula yokugeleza. Bobabili banezijometri ezilula futhi azikho ama-orifice amancane noma afihlekile.
Enye inzuzo ukulawulwa okuqondile kwamapharamitha okusebenza anethonya ku-cavitation. Ama-homogenizer e-Hielscher ama-homogenizer angasetshenziswa kuma-amcillation amplopes kusuka ku-approx. I-micron eyi-1 kuye kwangama-200. Umfutho we-liquid ungasukela ku-0 uye ku-approx. 500psig. Njengoba ukukhuphuka kwengcindezi nengcindezi kuyimingcele enethonya kakhulu, uhla olusebenzayo lwepharamitha ngalinye livumela ukuthambile okukhulu ekuqhubekiseni okwenzakalisayo.
Ama-homogenizer anamandla amakhulu UP100H futhi UP400St
Ama-homogenizer e-Hielscher e-Hielscher alawulwa nge-amplitude. Ngalokhu, amplitude elungisiwe izogcinwa ngaphansi kwazo zonke izimo zokusebenza. Lokhu kwenza ukuthi i-ultrasonication ilawulwe futhi iphindeke. Ukwenza i-Sonication ngaphansi kwamapharamitha afanayo wokusebenza kuzokhiqiza imiphumela engaguquki futhi ehlekayo. Lokhu kubalulekile kuzinga lezinto ezikhiqizwayo kanye nokwanda kwenqubo yemiphumela kusuka kwelebhu kuya ezingeni lokukhiqiza.
Ngaphandle kokulungiswa kwe-dispersions kanye ne-emulsions, ama-homogenizer e-ultrasonic asungulwe ngokuqinile ku-biotechnology, cellular kanye ne-molecology biology, kanye nesayensi yempilo yokuhlaziywa kwamaseli kanye nokuhlukaniswa kwezinto, ukuphazamiseka kwezicubu, ukukhishwa kwezakhi zomzimba ezingaphakathi kanye nokusikwa kwe-DNA, i-RNA, ne-chromatin . Ama-homogenizer e-Ultrasonic ayatholakala ukulungiselela isampula yamanani amancane (0,1mL) afinyelela kumanani amaningi kakhulu ezinqubo zezimboni (isb. Ukukhishwa kwamakhemikhali we-bioactive for supplement yokukhiqiza).
Ukuze uphazamise izicubu nge-homogenizer ye-ultrasonic, isisombululo se-buffer se-isotonic sisetshenziselwa ukumisa ukulimala kwe-osmotic. Ama-homogenizer ama-Hielscher ama-homogenizer eza ne-sensor yokushisa kanye nokulawulwa kokushisa, okuvumela ukugcina amasampuli ebangeni elilawulwa kahle lokushisa.
Ama-Ultrasonic Homogenizer kunoma iyiphi i-Scale
I-Hielscher ikhiqiza ama-homogenizer e-ultrasonic e-homogenization ye noma iyiphi ivolumu yesampula ngoba batch noma inline ukucubungula. Ama-homogenizer weLabhoratri ingasetshenziselwa imiqulu kusuka ku-1.5mL kuya ku-approx. 2L. Ama-homogenizer wezimboni ze-Ultrasonic asetshenziselwa ukuthuthukiswa kwenqubo nokukhiqizwa kwamatch kusuka ku-0.5 kuya ku-2000L noma ukugeleza kwamazinga ukusuka ku-0.1L kuya ku-20m³ ngehora.
Ithebula elingezansi, libonisa izincomo zedivayisi ejwayelekile ngokuya ngevolumu ye-batch noma isilinganiso sokugeleza okumele sicutshungulwe. Chofoza kuhlobo lwedivaysi ukuthola imininingwane eminingi nge-homogenizer ngayinye ye-ultrasonic.
Ama-Ultrasonic Homogenizer weZicelo Zokusebenza eziphezulu
I-Hielscher homogenizer yama-Hielscher yihhashi lomsebenzi lokuxuba kanye ne-homogenization. Ama-homogenizer we-Ultrasonic angama-compact futhi ayithuluzi elithembekile lokuhlakazeka okusheshayo nokuxhuma ngokushesha kwamasampula amancane naphakathi. Ama-homogenizer we-Hielscher we-industrial ultrasonic ayindlela ephumelelayo futhi egqamile yamasu endabuko homogenization anjenge-high homogenizer noma ama-mill ubuhlalu. Ama-homogenizer we-Hielscher angakhipha ama-amplope aphezulu kakhulu futhi ngaleyo ndlela anamandla akhethekile uma kuziwa kwinqubo yokuxubha, yokusabalalisa nokugaya. Amandla afinyelela ku-200µm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso ye-ultrasonics iyatholakala. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Amakhasimende ethu anelisekile ngokuqina okuqinile nokuthembela kwe-Hielscher Ultrasonics’ ama-homogenizer. Ukufakwa emikhakheni yesicelo esisebenza kanzima, izindawo ezifunwayo kanye nokusebenza kwe-24/7 kuqinisekisa ukucutshungulwa okusebenzayo nokunempilo. Ukuqina kwenqubo ye-Ultrasonic kunciphisa isikhathi sokucubungula futhi kufinyelela imiphumela engcono, ie izinga eliphakeme, isivuno esiphakeme, imikhiqizo emisha.
Amandla aphezulu we-homogenizer ephezulu I-Lab ukushayela futhi Izimboni isikali.
Izicelo ze-Ultrasonic Probe-Type Homogenizer
Inkambu yezicelo, lapho ama-homogenizer probe asetshenziswa ngempumelelo, ifinyelela izinqubo eziningi embonini ehlukahlukene. ukusetshenziswa okuvelele kakhulu kwama-ultrasonicators kufaka phakathi ukulungiswa kokumiswa, ukusatshalaliswa kanye ne-emulsion, ukumila okumanzi kwe-micron- ne-nano-izinhlayiya, ukuncibilikisa izimpuphu namathebulethi, ukukhiqizwa kokukhishwa kusuka ku-botanicals, i-cell lysis, ukukhishwa kanye nokugunda okwalandela kwe-DNA, i-RNA kanye ne-chromatin, ukukhishwa kwamaprotheni, ukubalwa kwe-APIs kuma-liposomes, nokuphendula kwe-sonochemical, lapho amagagasi anamandla e-ultrasound asetshenziselwa ukuqala nokusheshisa ukuhlelwa kabusha (i-sono-catalysis, i-sono-synthesis), ukwandisa ukudluliselwa kwesisindo nokuguqula izindlela zokuphendula.